लेनिनसँग च्याट- विचार - कान्तिपुर समाचार
आश्विन ७, २०७४ विमल निभा
काठमाडौँ — मरेड सरासरी यतातिर आइरहेका थिए । नयाँ कमरेड हुन् । एकाध महिनाअघि नै पार्टी प्रवेश गरेका । पहिले कुनै घोर गैरकमरेडीय पार्टीमा थिए । हाल यतै सशरीर मौजुद रहेका छन् । मेरा पुराना परिचित हुन् ।
‘नमस्ते।’ मेरो अभिवादनको जवाफमा अघि बढेर दह्रोसँग हात मिलाए उनले।
‘कताबाट कमरेड?’ मेरो विलकुलै सामान्य प्रश्न थियो, ‘पार्टीबाट आइरहनुभएको हो, कमरेड?’
‘हो, पार्टीबाट।’ उनले अत्यन्तै आनन्दित मुद्रामा भने, ‘बडो मजा
‘तपाईलाई पार्टी प्रवेशमा अहिलेसम्म मजा आइरहेको छ, कमरेड?’ म पनि दंग परेको थिएँ।
‘कस्तो पार्टी प्रवेश?’ उनले आफ्नो अनुहारको आनन्दलाई केही मत्थर पारेर मतिर हेरे।
‘यही कम्युनिष्ट पार्टी प्रवेश नि।’
‘तपाईको कुरो मैले बुझिन।’
‘केही सप्ताहअघि पार्टी प्रवेश गर्नुभएको होइन कमरेड?’ मैले सम्झाउन खोजेंँ उनलाई, ‘त्यही कम्युनिष्ट पार्टी प्रवेशको कुरा गरेको हुँ मैले।’
‘एक, कम्युनिष्ट पार्टी प्रवेश?’
‘हो, कम्युनिष्ट पार्टी प्रवेश।’
‘त्यो त हो।’ कमरेडले आफ्नो अनुहार बिगारे, ‘तर अहिले त मसोल्टी होटलको पार्टी एटेन्ट गरेर आइरहेको छु।’
‘हत्तेरिका।’ मैले पनि मुख बिगारेर भनेंँ, ‘म त कमरेडलाई पार्टी अफिसमा पुगेर आइरहनुभएको हो कि भनेर सोधिरहेको हुँ।’
‘हो, हो, हो, हो....।’ कमरेड उन्मुक्त ढंगले हाँस्न थाले।
म चाहिंँ आफ्नो बेवकुफीमा थोरै लज्जित भएर चुप लागेंँ। कमरेड हासिनै रहेका थिए। केही बेरपछि कुराकानीलाई ठाउँमा ल्याउन मैले विस्तारै सोधँें, ‘कमरेड, कस्तो रह्यो त पार्टी?’
‘हें हें....।’ म अलिकति हासेँ, ‘सोल्टी होटलको पार्टी?’
‘सोल्टी होटलको पार्टी?’
‘हो, सोल्टी होटलको पार्टी।’
‘बडो राम्रो रह्यो।’ कमरेडले चरम आनन्दमा पुगेर भने, ‘पहिले तीन बोतल चिसो बियर लिएँ, त्यति मजा लागेन। अनि फटाफट रेडवाइन लिन थालँें। त्यसमा पनि त्यति मजा नआएकोले आखिरीमा आफ्नो पेटेन्ट ह्विस्की नै लिएँ।’
‘हेर्नाेस्, ह्विस्की जतिको मजा अरू केहीमा छैन।’ उनले उही आनन्दको भावमा थपे।
कमरेड सोल्टी होटलको पार्टीको आनन्ददायी यादमा पुरै डुबेका थिए। अर्थात् ह्विस्कीमा। त्यसकारण उनलाई त्यहाँबाट निकाल्न मैले कुरालाई मोड्न खोजँें, ‘अनि तपाईको पार्टीको कुरो के छ नि कमरेड?’
‘भनिहालँें नि, जति बियर र वाइन लिए पनि ह्विस्की जतिको मजा अरू केहीमा छैन।’ उनले प्रमुदित मुद्रामा भने, ‘अझ ह्विस्कीमा पनि बरबन ह्विस्कीको के कुरा गर्नु !’
‘होइन, म बियर, वाइन र ह्विस्कीको कुरा गरिरहेको छैन।’ मैले भनँें, ‘म पार्टीको कुरो गरिरहेको छु, कमरेड।’
‘म पनि त पार्टीकै कुरो गरिरहेको छु नि, अरू के?’
‘म तपाईको पार्टीको कुरो गरिरहेको छु, कमरेड।’ मैले स्पष्टसँग भन्नुपर्‍यो, ‘तपाईले ज्वाइन गर्नुभएको कम्युनिष्ट पार्टीको कुरो नि।’
‘ए, कम्युनिष्ट पार्टीको कुरो !’ उनी एक्कासी गम्भीर भए, ‘अचेल म पार्टीमा क्लास लिइरहेको छु।’
‘कस्तो क्लास कमरेड?’
‘खोइ, वैचारिक क्लास भन्छन्।’ उनको गम्भीरता अरू बढ्यो, ‘हाम्रा ठूला–ठूला नेता कमरेडहरू क्लास लिइरहेका छन्।’
‘बल्ल माक्र्सवादी हुन थाल्नुभयो, कमरेड।’ म हलुका मुस्कुराएँ, ‘अबतपाई विचारले पनि पक्का माक्र्सवादी हुने हुनुभयो।’
‘को माक्र्स?’ कमरेडले अचम्मसँग प्रश्न गरे मसँग, ‘के माक्र्सवादी?’
‘तपाईकै माक्र्सवादी पार्टीको माक्र्स?’ मेरो स्वरमा चिढिएको भाव थियो, ‘माक्र्सबारे पनि थाहा छैन, कमरेडलाई?’
‘किन थाहा नहुनु?’ कमरेडले जोशका साथ भने, ‘चाइनाको माक्र्स।’
‘हो, चाइनाको माक्र्स?’ उनलेजोड दिएर भने, ‘चाइनाको
‘अनि लेनिनलाई नि?’ मेरो मनमा उनको वैचारिकतामाथि सन्देह उत्पन्न भएकोले सोधेंँ, ‘लेनिनलाई त चिन्नुभएको होला कमरेड?’
‘लेनिनलाई त म पहिलेदेखि नै चिन्छु।’ कमरेडले मेरो प्रश्नको जवाफमा झट्ट भने, ‘यो पार्टीमा आउनुभन्दा अघि मैले लेनिनलाई भेटिसकेको छु।’
‘कहाँ भेट्नुभयो, लेनिनलाई?’ म चकित थिएँ।
‘पोहोर नै लन्डनमा भेटेको हुँ, लेनिनलाई।’
‘पोहोर लन्डनमा भेट्नुभएको हो कमरेडले लेनिनलाई?’
‘हो, एउटा इन्टरनेसनल कन्फ्रेन्समा भाग लिन लन्डन गएको थिएँ। त्यसमा लेनिनले पनि पार्टीसिपेट गरेका थिए। हाम्रो त्यहीं भेटघाट भयो। रातिको डिनरमा राम्रो चिनजान हुनगयो। कमरेडले भने, ‘अहिले पनि म कहिलेकाहीं लेनिनसँग च्याटमा कुराकानी गर्ने गर्छु।’
‘लेनिनसँग च्याट।’ मैले मनमनै भनेंँ।
‘हिजै मेरो लेनिनसँग च्याटमा भेट भयो।’
कमरेडको कुरोले मलाई मौनबनाएको थियो। म पुरै आश्चर्यचकित थिएँ। कुन्नि, यो कसको असर थियो ! उनी भर्खरै प्रविष्ट भएका नेपालको एक ठूलो माक्र्सवादी–लेनिनवादी कम्युनिष्ट पार्टीको विशिष्ट वैचारिक स्तरको अथवा सोल्टी होटलको विशुद्ध बरबनवादीह्विस्की पार्टीको !
आश्विन ७, २०७४ हरि थापा
काठमाडौँ — डोरबहादुर विष्टलाई मैले टाढैबाट देखेको हुँ, नजिकबाट भेट्न पाइनँ । २०५२–५३ सालतिर मानवशास्त्र, समाजशास्त्रमा रुचि बढ्दै जाँदा उनी मेरो मानसपटलमा छाए । मैले समाजशास्त्र/मानवशास्त्र औपचारिक रूपमा त पढिनँ तर उनको खोज भने निरन्तर रह्यो ।
डोरबहादुर विष्टलाई मैले टाढैबाट देखेको हुँ, नजिकबाट भेट्न पाइनँ। २०५२–५३ सालतिर मानवशास्त्र, समाजशास्त्रमा रुचि बढ्दै जाँदा उनी मेरो मानसपटलमा छाए। मैले समाजशास्त्र/मानवशास्त्र औपचारिक रूपमा त पढिनँ तर उनको खोज भने निरन्तर रह्यो।
जब मैले डोरबहादुरबारे चासो राख्न थालेको थिएँ, उनी हराइसकेका थिए। २०६० पछि मैले उनलाई साँच्चै खोज्न थालें। चौधबिसा पुगें, कीर्तिपुरका फाँटहरू डुलें। ललितपुरका गाउँमा, कालीगण्डकीका थकाली बस्तीमा, खुम्बु क्षेत्रमा, सुर्खेततिर, दैलेखका गाउँगाउँमा, राउटे बस्तीमा, डडेलधुरामा उनका पदचिह्न नियाल्न खोजें। नेपाली प्राज्ञ र उनका विद्यार्थीसँग, उनले संगत गरेका केही विदेशीसँग, परिवारसँग र उनका पुस्तक र लेखहरूमा उनलाई खोजें।
डोरबहादुर हराएको आउने पुस २७ गते २१ वर्ष पुग्छ। मैले मात्रै होइन, उनलाई धेरै मानिसले धेरै प्रकारले खोजे, खोजिरहेका छन्। हराएका–नहराएका कमै विद्धान्ले यो प्रकारको राष्ट्रिय चासो पाएका छन्। उनका परिवार र शुभचिन्तकहरू अझै उनी फर्कने आसमा छन्।
डोरबहादुर विष्टको जन्म १९८३ माघ ४ गते ललितपुरको झरुवारासीमा भएको हो। सैनिक पिताका छोरा डोरबहादुर परम्परागत धार्मिक, सांस्कृतिक वातावरणमा हुर्के। पाटन माविबाट एसएलसीपछि उनले त्रिचन्द्र कलेजबाट बीए पास गरे। २००९ सालमा विष्टले पाटन मंगलबजारस्थित आदर्श कन्या निकेतन स्कुलमा हेड टिचर भएर जागिरे जीवनको सुरुआत गरे। केही वर्ष उनको सक्रियता शिक्षा क्षेत्रमै रह्यो।
२०१३ सालमा उनको जीवनमा एउटा मोड आयो। लन्डन युनिभर्सिटीमा साउथ एसियन कल्चरका विज्ञ प्रोफेसर क्रिस्टोफ भोन फिउअरर हाइमेन्डर्फ शेर्पासम्बन्धी अध्ययन गर्ने विचारले नेपाल आए। आफ्ना लागि सहयोगी खोजिरहेका हाइमेन्डर्फसँग उनले भेट्ने अवसर पाए। डोरबहादुरले प्रोफेसर जिम फिसरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन, “जब मैले हाइमेन्डर्फबारे थाहा पाएँ, उनलाई भेटें र भनेँ— ‘तपाईंले मलाई आफूसँग आउने अनुमति दिनुभयो भने म धेरै खुसी हुनेछु। मैले मेरो आफ्नै देश र समाज मेरा दुइटा आँखा र कानले मात्रै होइन, लन्डन विश्वविद्यालयका प्रतिष्ठित प्रोफेसरका दुइटा आँखा र कान थपेर देख्न पाउनेछु। यसको बदलामा तपाईं जे भन्नुहुन्छ म गर्न तयार छु।’ यसरी मैले आफ्नो सेवाको प्रस्ताव राखेको थिएँ।”
डोरबहादुरले त्यस बेला पूरै एक वर्ष हाइमेन्डर्फसँग बिताए। सात महिना खुम्बु, दुई महिना पूर्वी पहाडी जिल्लाहरू, दुई महिना लमजुङ र कास्कीमा र एक महिना काठमाडौंको दक्षिण भेगका क्षत्री समुदायसँग।
२०१७ सालमा उनले लन्डन जाने अवसर पाए। लन्डन पुगेपछि उनलाई मानवशास्त्र पढ्ने इच्छा भयो। तर हाइमेन्डर्फले यो कुरा रुचाएनन्। जसोतसो उनी मानवशास्त्र विभागमा अन्डरग्राजुएट कोर्सका लागि भर्ना भए। उनले इन्डियन इथ्नोग्राफीमा पढाइ पूरा गरे। थप अध्ययनका लागि हाइमेन्डर्फले सहयोग गरेनन्। बरु आफूसँग काम गर्न नेपाल फर्काए। तर, यसबेला डोरबहादुर ग्राजुएट स्टुडेन्टका रूपमा भर्ना भइसकेका थिए। हाइमेन्डर्फले उनलाई मास्टर्सका लागि पनि सहयोग गर्ने वचन दिएर आफूसँग काम गर्न नेपाल फर्काएका थिए। नेपाल फर्केर काम सकेपछि यी ब्रिटिस प्रोफेसरले विष्टलाई लन्डन नलैजाने प्रपञ्च रचे।
यसै समयदेखि हाइमेन्डर्फसँग डोरबहादुरकोमन कुँडियो। र, उनको जीवनमा अर्को अध्यायसुरु भयो।
‘पिपल अफ नेपाल’
डोरबहादुरले हाइमेन्डर्फसँग घुमेका सबै ठाउँमा पुन: आफू घुमेर तथ्यांक संकलन गरे। तीबाहेकका ठाउँ पनि घुमे। विभिन्न जातजातिसम्बन्धी जानकारी लिए। र, २०२३ सालमा ‘पिपल अफ नेपाल’ पुस्तक प्रकाशित गरे। जति बेला नेपाली समाज निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा जकडिएको थियो, एक भेष, एक धर्म, एक भाषा र एक संस्कृतिको चंगुलमा परिसकेको थियो, त्यही बेला डोरबहादुरले विविधताको ऐना देखाइदिए।
‘पिपल अफ नेपाल’ प्रकाशित भएपछि नेपाली विविधताको झलक नेपाली र विदेशीमाझ प्रकट भयो। पुस्तकले नेपालका जातजातिको विविधता छर्लङ्ग पारे पनि विविधताविरोधीलाई यो कुराले खुसी बनाएन। उनीविरुद्ध दरबारमा उजुरी पर्‍यो। उनका जेठा छोरा मानवशास्त्री डा. हिक्मत विष्टले बताएअनुसार, उजुरीको आशय ‘डोरबहादुरले राष्ट्र भाँड्न लाग्यो, राष्ट्र फुटाउन लाग्यो, यसलाई अराष्ट्रिय तत्त्व घोषणा गर्नुपर्‍यो’ भन्ने थियो। त्यसपछि अराष्ट्रिय तत्त्व घोषणा गर्नुपर्ने हो कि होइन भनेर डोरबहादुरको खोजी सुरु भयो।
उनका माहिला छोरा, पूर्वमन्त्री केशरबहादुर विष्टका अनुसार, पुस्तक सार्वजनिक भएको समयमा डोरबहादुर अमेरिकामा थिए। उनलाई फर्कनेबित्तिकै विमानस्थलबाटै पक्रने योजना बनेको थियो। ‘पिपल अफ नेपाल’ सूचना विभागले छापेको थियो। तत्कालीन युवराज वीरेन्द्रले विदेशीहरूमाझ यो पुस्तकका धेरै प्रति वितरण गरिसकेका थिए। त्यसैले पनि डोरबहादुरलाई अराष्ट्रिय तत्त्व घोषणा गर्न वा पक्रन असम्भव थियो। तर, यो पुस्तकले प्रोफेसर क्रिस्टोफ भोन फिउअरर हाइमेन्डर्फलाई भने झस्कायो।
डोरबहादुरले यसरी तरंग ल्याएर आफ्नो प्राज्ञिक अभियान सुरु गरे। उनको नेपाल अध्ययन, नेपालका विभिन्न ठाउँको यात्रा र नेपालको विकासमा जातीय विविधताको महत्त्वसम्बन्धी लेखरचना प्रकाशन र प्रवचन निरन्तर रह्यो। दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक हुँदा होस् वा ल्हासाका लागि महावाणिज्य दूत हुँदा, उनको नेपाल अध्ययन अनवरत चलिरह्यो। ‘रिपोर्ट फ्रम ल्हासा’ र अन्य साहित्यिक कृतिहरू पनि प्रकाशित भइ नै रहे।
डोरबहादुर मानवशास्त्र पढ्ने पहिलो नेपाली हुन्। उनको आफ्नो अध्ययन र अनुसन्धान त चलि नै रहेको थियो, मानवशास्त्रप्रति गहिरो रुचिका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मानवशास्त्र र समाजशास्त्रको अध्ययनको सुरुआतको पहल पनि उनैले गरे। समाजशास्त्र/मानवशास्त्र विभागको गठन भयो। उनले एमए समाजशास्त्र/मानवशास्त्रको पाठ्यक्रम तयार गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले।
उनी २०३८ सालमा नेपाल र एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) को कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भए। सिनासमार्फत उनले थुप्रै युवा अनुसन्धानकर्तालाई अवसर दिलाए। उनी २०३८ देखि २०४५ सालसम्म त्रिवि मानवशास्त्र विभागमा प्राध्यापक र विभागीय प्रमुखका रूपमा सक्रिय रहे। फिल्ड एन्थ्रोपोलोजिस्टका रूपमा त उनले ख्याति कमाएका थिए नै, सिनास र त्रिवि मानवशास्त्र विभागमा सक्रिय हुँदा उनलाई नेपालका सांस्कृतिक सबलताहरू र समस्याहरूको अध्ययन गर्ने खास मौका मिल्यो।
विभिन्न अनुसन्धान, व्यापक अन्तरक्रिया र विद्यार्थीका शोधपत्रहरूमार्फत नेपाली विविधतामा लुकेका सामथ्र्य र समस्याहरूको यथार्थ तस्बिर हेर्न पाए उनले। सिनासमै उनलाई त्रिविको मानवशास्त्र विभागका पहिलो प्राध्यापकका रूपमा सम्मानित गरियो। प्राध्यापक डोरबहादुर विष्टलाई नेपालमा मानवशास्त्रका पिता भनिन्छ। प्राध्यापक डा. ओम गुरुङको भनाइ छ, ‘विष्टलाई हामीले नेपालको मानवशास्त्रका पिता र नेपाल स्कुल अफ एन्थ्रोपोलोजीका पनि पिता र अभिभावककै रूपमा लिएका छौं।’ नेपालको आफ्नै विशेषतायुक्त मानवशास्त्रको विकासमा योगदान गरेका कारण विष्टलाई नेपालको मानवशास्त्रका पिता
‘फ्याटालिज्म एन्ड डेभलपमेन्ट’
विकसित देशहरूको विकास झन् तीव्र गतिमा भइरहेको र नेपाल झनझन् पछौटेपनको सिकार हुँदै गएको अवस्थाबाट प्राध्यापक विष्ट भित्रभित्रै छटपटिइरहेका थिए। विकास गतिविधिहरू, नीति र योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन पक्षहरूलाई उनले नजिकबाट नियालेका थिए। यिनै समस्याजन्य प्रश्नहरूले घोच्दै जाँदा उनको ‘फ्याटालिज्म एन्ड डेभलपमेन्ट : नेपाल्स स्ट्रगल फर डेभलपमेन्ट’ पुस्तकको जन्म भयो। यसले नेपालले विकसित हुन गर्नुपरेको संघर्षमा बाधक पक्षहरू औंल्याएको छ। पुस्तकले एउटा वादको परिकल्पना गर्‍यो— ‘बाहुनवाद’। पण्डित्याइँ गर्ने ब्राह्मणहरूमार्फत फैलाइएको भाग्यवादले नेपालको विकास प्रक्रिया अवरुद्ध पारेको जिकिर पुस्तकमा छ।
पुस्तकले नेपालको बौद्धिक जगत्मा ठूलो हलचल ल्यायो। यसका पक्ष–विपक्षमा मानिसहरू देखिए। तर, प्रभावकारी प्राज्ञिक बहस भने भएन। प्राध्यापक डा. नोबलकिशोर राईले एक ठाउँमा भनेका थिए, ‘डोरबहादुर विष्टले हाम्रो देशमा, समाजमा भएका कुरालाई प्राज्ञिक हिसाबले देखाइदिनुभयो। उहाँमा त्यो क्षमता थियो। हाइट थियो। बर्गत थियो।’ तर, आफ्नो नामका पछाडि ब्राह्मण थर जोडिएका प्राज्ञहरूलाई यो कुरा पच्न गाह्रो भयो। धेरैले डोरबहादुरले ‘मलाई नै भनेको हो’ जसरी पुस्तकको आलोचना गरे। ‘फ्याटालिज्म एन्ड डेभलपमेन्ट’ पुस्तक प्रकाशित भएलगत्तै सिनास जर्नलमा प्रकाशित प्राध्यापक डिल्लीराम दाहालको समीक्षा पनि आलोचनाले भरिएको थियो। डा. दाहालले लेखेका छन्, ‘समग्रमा पुस्तक असान्दर्भिक आधारहरूको वर्णनको उपज हो र यसले बहुसंख्यकमा निराशा र असमझदारी मात्रै बढाउनेछ।’
प्रगतिवादी नेपाली प्राज्ञहरूले पुस्तकको तारिफ गरे। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुस्तक चर्चित भयो। तर, पुस्तकको विरुद्धमा राजसंस्था नै जोडिएकाले डोरबहादुर कतै–कतै निराश पनि भए।
राजा वीरेन्द्रप्रति उनको ठूलो भरोसा देखिन्छ। राजाहरू मगरका सन्तान हुन् भन्ने यथार्थलाई हार्वर्डबाट शिक्षित राजाले अनौठो मान्लान् र चासोको विषय बन्ला भन्ने उनको अनुमान देखिन्छ। तर, यसो किन हुन्थ्यो? भाग्यवादको संरक्षक र जातीय विविधतालाई नै नकार्ने व्यवस्थाको संरक्षक संस्थाले उनको आलोचना गर्न थाल्यो। पञ्चायतकालमा अराष्ट्रिय तत्त्व घोषित नभएका डोरबहादुर बहुदलीय व्यवस्थामा दरबार छिर्न प्रतिबन्धित भए।
२०६४ पुसमा आयोजित ‘बिना डोरबहादुरका १२ वर्ष’ विषयक कार्यक्रममा प्राध्यापक अभि सुवेदीले भनेका थिए, ‘फ्याटालिज्म भनेको घनचक्करवाद पनि हो। केही होलाजस्तो हुन्छ तर अगाडि नै बढ्दैन। समाजलाई आफ्नो आधिपत्यमा राख्न खोज्ने र यथास्थितिमा राख्न चाहने शक्तिशाली मानिसहरूका मान्यता र चिन्तनलाई डोरबहादुरले बाहुनवाद भन्नुभएको हो।’ उनको सिद्धान्तको प्रतिवाद गर्नेहरूलाई डोरबहादुरले दिने जवाफ हुन्थ्यो, ‘संसारका विभिन्न देश विभिन्न कारणले अविकसित भए होलान्। भाग्यवादी त्यतातिर पनि होलान्। तर, नेपालको विकास नहुनाको वास्तविकता भनेको यहाँ ब्राह्मणवादले रोपेको भाग्यवाद हो।’
नेपालमा निरन्तरता केहीको पनि छैन। डोरबहादुरले एउटा तरंग ल्याए। कब्जा गरेर बसेकाहरू झस्के। उनीहरूले डोरबहादुरलाई एक्ल्याए। सकेसम्म अपमानित गरे। उनी हराएपछि उनको अभियान पनि लगभग हरायो। जनजाति आन्दोलनले एउटा उचाइ लियो। तर, त्यहाँ पनि राजनीतिक विभाजन र गुटगत विभाजनले गर्दा मुख्य मुद्दा नै हरायो।
डोरबहादुरले नेपाली समाजलाई अधोगतितिर धकेल्ने तत्त्वहरूको इमानदारीपूर्वक बयान गरेका थिए। सबैलाई थाहा भएको, सम्राटको नदेखिने कपडाजस्तै, चाकरी, आफ्नो मान्छे संस्कृति र भाग्यवादले ग्रस्त नेपाली समाजका विषलाई उनले सबैका अगाडि राखिदिए। यो कुरा सबैलाई पहिलेदेखि नै थाहा भए पनि उनले ठूलो स्वरमा भनिदिए। उनले भनेका कुराबाट समाजको एउटा तप्का निकै भयभीत भयो। चाकरी, चाप्लुसी र भाग्यवादकै आडमा समाजको उच्च वर्गमा गनिने त्यो समुदायलाई उनका कुरा पच्ने कुरै भएन।
अहिले मुलुक गणतन्त्रमा गएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको थालनी भएको छ। मुलुकको व्यवस्था सञ्चालनको ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ भएको यो अवस्थामा अब त केही सोच्ने हो कि? कहिलेसम्म रेमिट्यान्सले मुलुक धान्छ? किन हामी संसारको एउटा गरिबतम राष्ट्रमा दरिंदै छौं? व्यापार घाटा किन अकासिँदै छ? लगानीको प्रतिफल किन प्राप्त हुँदैन? परियोजनाहरू समयमै किन पूरा हुँदैनन्?
डोरबहादुरले आफ्ना कुरा लेखेर मात्रै छाडेनन्। चिच्याईचिच्याई भनिरहे, लेखिरहे। भाग्यवादको कुरा पनि पुस्तकमा मात्रै सीमित भएन। यो एउटा अभियान नै थियो। जुम्लाको चौधबिसामा यसको व्यावहारिक परीक्षणको थालनी गरे।
पुस्तक प्रकाशित भएलगत्तै कर्णाली इन्स्टिच्युट नामक संस्था स्थापना गरेर डोरबहादुरले चौधबिसामा अनुसन्धान र गाउँको विकास कार्य थाले। एउटा उद्देश्य त उक्त पुस्तकको व्यावहारिक प्रयोग गर्नु थियो भनेर डोरबहादुरले उल्लेख गरेको पाइन्छ। बिजुली, खानेपानी, विद्यालय भवन निर्माण, घट्ट सुधार, माछापालन, स्याउखेती आदि र मुख्य रूपमा समाज सुधारको अभियानको थालनी चौधबिसा र आसपासका गाउँमा सुरु भएको थियो। त्यहाँ रहँदा उनी मानवशास्त्रका पिता, मानवशास्त्रका ख्यातिप्राप्त प्राध्यापक भनेर चिनिएनन्। सबैले नजिकमा बुवा भन्थे। टाढाबाट फुलेका बड्डा।
डोरबहादुरको त्यहाँ मुख्य कार्य खस समुदायमाथिको अध्ययन थियो। तर ‘जनयुद्ध’ को समयमा चौधबिसामा रहेको कर्णाली इन्स्टिच्युटको भवनमा माओवादीहरूले आगजनी गरे। त्यहाँका सम्पूर्ण पुस्तक र दस्तावेज जलाइदिए। डोरबहादुरले २७ वर्षअगाडि प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त र उल्लेख गरेका कुरा अहिले पनि लगभग उत्तिकै सान्दर्भिक छन्। तत्कालीन समयमा त दरबारसमेतको आडमा उनको विरोध भयो। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि चाकरी, चाप्लुसी, आफ्नो मान्छे र भाग्यवादी संस्कृतिको बोलवाला चली नै रहेको छ। नयाँ नेपाल निर्माणका लागि उनका कर्महरू सम्झने र भाग्यवादविरुद्ध बहस थाल्ने समय घर्किसकेको छैन। यो देशको सुन्दर भविष्य देख्न चाहने डोरबहादुरलाई व्यावहारिक रूपमा सम्झने समय आएको छ।